PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-01 - ESKHALENI:
Ilanga langeSonto - 2018-04-01 - Ezemidlalo -
NGIGEZE izandla ngezinkulumo ezigcwele ezinkundleni zokuxhumana lapho kuneqeqebana labathile abagxeka i-athletics South Africa (ASA) bethi kayiphethwe kahle futhi umengameli wayo, u-aleck Skhosana ( osesithombeni), kufanele ehle esikhundleni.
Umbuzo enginawo ngothi uma ehla kuzongena bani ngoba ngokwami ubukeka esayibambe kahle kwazise uqede nezinkinga eziningi ZE-ASA ezaqala ngowezi-2009 ngesikhathi ucaster Semenya ebuya nendondo yegolide kwiInternational Association of Athletics Federation (IAAF) World Championships egermany.
Kuzokhumbuleka ukuthi inhlangano engamele ezemidlalo eningizimu Afrika, isouth African Sports Confederation and Olympic Committee (Sascoc), yaxosha loyo owabe engumengameli WE-ASA uleonard Chuene nebhodi yakhe yonke, besolwa ngokuphatha budlabha imali kanye nodaba lobulili bukacaster oluseyinzukazikeyi namanje.
Ukuphuma kukachuene kuholele ekutheni isascoc iqoke uraymond Mali ukuba ahole I-ASA, kwaba ukwanda kakhulu kwezinkinga. Kube sekungena ujames Evans kwanhlanga zimuka nomoya.
Abasubathi baze bashaya itoyitoyi bekhala ngokungaphathwa kahle kwe-asa kanti ngaleso sikhathi kwakungacaci noma abasubathi bazokwazi ukuyomela elakuleli emidlalweni yamazwe ngamazwe.
Izinkinga ebezikhona ziholele ekutheni u-evans amiswe ngenxa yokuthi ezokugijima bezibonakala zifile, kwabe sekuqokwa uzola Majavu naye owathwala kanzima ezama ukulungisa amaphutha awafica.
Ngesikhathi sikamajavu iconfederation of African Athletics (CAA) yathatha isinqumo sokuphuca elakuleli igunya lokusingatha imidlalo yamajuniya ngowezi-2013 ngenxa yokuthi I-IAAF yathi ngeke ikwazi ukusebenzisana nobuholi bakhe (umajavu) ngoba akaphumi kwezokugijima.
Kuze kwasiza ukungenelela KWE-IAAF, umajavu wathatha isinqumo sokuhoxa ekuholeni I-ASA kwabe sekuqokwa ibhodi yesikhashana ngaphambi kokuba kube nokhetho olunqotshwe nguskhosana ngowezi-2014.
Uskhosana nethimba lakhe bazamile ukubuyisa uzinzo nokuhlonishwa kwale nhlangano emhlabeni njengoba kuthe ngowezi-2015 uwayde van Niekerk waba yingqwele yomhlaba kumaworld Championships abesebeijing, echina.
Ngonyaka olandelayo wephule irekhodi lomhlaba le-400m kumaOlympic Games abesebrazil. I-ASA iphinde yakwazi ukukhokha isikweletu sika-r20 million esificwe wubuholi bukaskhosana ngesikhathi bungena ehhovisi.
Ngaphandle kukawayde, baningi abasubathi bakuleli abenza kahle emidlalweni yomhlaba kubalwa ucaster, uluvo Manyonga, u-akani Simbine, uclarence Munyai, usakwakhana Zazini ukukha nje phezulu.
Ngowezi-2016 iningizimu Afrika ibisingethe imidlalo YE-CAA ebisethekwini lapho iqede inezindondo eziningi kunawo wonke amazwe abekhona kanti nonyaka I-ASA ikwazile ukuthola abaxhasi bakwaliquid Telecom abebeseke imidlalo yetrack and Field egijinywe emadolobheni amathathu ehlukene, ejohannesburg, etshwane nasepaarl.
Kumanje ixoxisana nesuperSport ukuba isakaze imidlalo yayo.
Iningizimu Afrika isanda kuvakashelwa ngu-usain Bolt wasejamaica ophethe irekhodi lomhlaba kwi-100m nakwi-200m ukuzokhuthaza intsha yakuleli.
Emidlalweni ye-liquid Telecom bekukhona ujustin Gatlin waseUnited States of America (USA), u-isaac Makwala wasebotswana nabasubathi bakuleli abahlonishwayo abakubeke kwacaca ukuthi ezokugijima ziyakhula kuleli.
Ngokubona kwami, ukuba I-ASA iyinhlakanhlaka laba basubathi bebengeke bafike kuleli.
Uskhosana usanda kuhlonishwa YI-IAAF okuyinhlangano yokugcina ephethe ezokugijima emhlabeni. Sekuze kwaba yiminyaka emibili ilandelana abagijimi beziwolela nje izindondo kumasouth African Sports Awards.
Yilokhu-ke okwenza ngixakeke uma kukhona abathi ezokugijima kaziphethwe kahle ngaphandle uma leli qeqebana linegqubu elithile.